LACAG LA'AAN MiG-21MF FSX & P3D - Rikoooo
downloads 24 740
Tani add-on waxaa loogu talagalay kuwa jecel jilitaanka adag, micnaheedu waa inaadan bilaabi karin matoorada adigoon marka hore aqrinin oo fahmin buugga. Uma baahnid inaad soo dejiso haddii aadan diyaar u ahayn inaad maal gasho si aad u fahamto sida ay u shaqayso. Nidaamyada iyo astaamaha isbeega ee 'Virtitit' waxay lamid yihiin kuwa MIG-21 MF ee dhabta ah. Xirmadan waxaa ku jira dhawaaqyo 100% dhab ah, dib u hagaajinno badan iyo VC qurux badan. Moodhka dibedda sidoo kale si aad ah ayaa loo sameeyaa. Waayo FSX-SP2 ama Dardar gelinta.
Waayo qaadataan-off waxaa lagu talinayaa in ay leeyihiin hal heer oo sacadda iyo goo ugu badnaan.
Buuggan waxaa ka mid ahaa in this waa in pack Czech, si kastaba ha ahaatee, Rikoooo ayaa laga helay mid ka mid ah turjumay by Lukasz Kacprzykowski. waxaa Download hoos ku qoran
The Mikoyan-Gurevich MiG-21 waa jet ah Soviet dagaalka ee sidoo kale loo yaqaano by Fishbed ee code NATO. Tani waa jet ah wax soo saarka ee waqtiga oo dhan, iyada oo nuqul 11,000.
Aad u xoog badan iyo waliba dhiifoon, ee MiG-21 si kastaba ha ahaatee ma aha in aad u dheer dagaal iyo qalabka elektarooniga ah in navigation, waxaa ah "pilot diyaarad" samaynta, natiijooyinka loola ay ku xiran tahay xirfadaha dagaal doonana. Inkasta oo daciifnimo ay, waa aad loo jecel yahay, ay kharashka yar ayaa waxay awood ciidamada badan hawada u leedahay in ay dagaalka ugu horeysay supersonic.
Bandhigid video ka Fox 4 xubin ka Rikoooo
Bilow ilaa habka
hababka aasaasiga ah oo duulaya
video Hiwaayadda for bilowdo matoorada iyo Air Show (dhab ah)
Video: daqiiqo 10 of happyness (dhab ah)
Author: Ivan Jurcaga - Peter Priskin - Kendy Schwarz
Saab J-21 Dagaalyahan Reer Sweden FSX SP2